लकडाउन खुलेपछि काठमाण्डौ उपत्यकामा बढ्यो खतरा, आज एकै दिन ३० जना कोरोना संक्रमित थपिए ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउन खुलेपछि काठमाण्डौ उपत्यकामा बढ्यो खतरा, आज एकै दिन ३० जना कोरोना संक्रमित थपिए !
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा २९३ जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएकाे छन् । योसँगै कुल संक्रमित १५ हजार ७८४ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित संख्या ३० पुगेको छ । काठमाडौं जिल्लामा २७, ललितपुरमा दुई र भक्तपुरमा एकजना संक्रमित भएका छन् ।
क्वारेन्टाइनमा ३१ हजार ५७३ र आइसोलेसनमा एकहजार २०३ जना रहेका छन् ।आज एकसय ३२ जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । अहिलेसम्म छहजार ५४७ डिस्चार्ज भएका हुन ।
त्यस्तै सरकारले राजधानीको ढलको पानीको नमुनामा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) भेटिए पनि त्यो मानिसमा नसर्ने बताएको छ। आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले यस्तो बताएका हुन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार ढलको पानीमा कोरोना भाइरस दुई दिनसम्म बाच्ने भए पनि यो मानिसमा सर्न नसक्ने अध्ययनले पुष्टि गरेको जानकारी दिए। ढलमा अन्य विभिन्न किटाणु हुने भएकाले ढल व्यवस्थापनमा काम गर्ने व्यक्तिले सुरक्षाका उपाय भने अपनाउनुपर्ने बताए।
‘राजधानीको ढलको नमुना लिएर परीक्षण गर्दा कोरोना देखियो भन्ने समाचारमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ’, प्रवक्ता गौतमले भने, ‘विश्वमा अन्यत्र भएका अध्ययनले व्यक्ति कोभिड-१९ बाट संक्रमित रहेकै अवस्थामा वा निको भइसकेपछि पनि ढलमा कोभिड-१९ भाइरल आरएनए फ्र्यागमेन्ट अर्थात् भाइरसका टुक्राटाक्री भेटिएको देखिन्छ। जुन सामान्यतया रोग सार्ने खालको हुँदैन उनले भने।’
मध्यपहाडी लोकमार्गको कास्की खण्ड हिलाम्मे
नेपालमा पनि कोरोना उपचारमा ‘रेमडेसिभिर’ प्रयोग गरिने
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पदबाट राजीनामा दिँदै !
सोमबार यसरी गर्नुहोस् भगवान शिवको आराधना, मिल्ने छ खुशी
जो ८० दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि बल्ल घर जान पाए